आज साउने सङ्क्रान्ति, हिन्दुधर्मालम्बी महिलाहरुको विशेष महिना – Aaj ko Sandesh
साम्राज्ञीका पूर्व प्रेमी मयंकसंग अभिनेत्री सारा सिर्पालीको प्रेम चर्चा, यस्तो तस्विर सार्बजनिक
मुख्य पृष्ठ /News/आज साउने सङ्क्रान्ति, हिन्दुधर्मालम्बी महिलाहरुको विशेष महिना
काठमाण्डौ – सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन देशभर आज साउने सङ्क्रान्तिका रुपमा मनाइँदैछ । साउनदेखि नै सूर्य दक्षिण हुँदै हिँड्ने भएकाले आजैदेखि दक्षिणायन शुरु हुन्छ । माघ १ गते शुरु हुने उत्तरायण र साउन १ गते शुरु हुने दक्षिणायन शुरु हुने दिनलाई विशेष रुपमा मनाइन्छ ।
अधिकांश नेपाली खेतीमा लाग्ने भएकाले असार महिनाभर कृषि कर्ममा व्यस्त हुन्छन् । त्यसक्रममा हिलो मैलोले लाग्ने छालासम्बन्धी रोग ठीक गर्न लुतो फाल्ने गरिएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए।
साउन महिनाभर देशभरका शिवालय विशेषगरी पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको विशेष भीड लाग्छ । साउन महिना शिवजीको र सोमबारलाई शिवको बार भनिन्छ । यसैले साउन महिना एवं सोमबार शिवालयमा भक्तजनको विशेष भीड लाग्छ । यसवर्ष कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण आफन्तकहाँ जान सहज छैन । यसैले धेरैले घरमै परिवारका सदस्यबीच रमाइलो गरी पर्व मनाउँदै छन् ।
साउने पानी छल्न महिलाहरु किन जान्छन् माइत ?
साउन महिनाको सोमबार हिन्दुधर्मालम्बीहरू यस माहिनालाई विशेष महिनाको रूपमा मनाउने गर्छन् । हिन्दु धर्मावलम्बीका लागि सोमबारको दिन विशेष महत्वको दिन हो । यस दिन धेरै महिलाहरु भगवान शिवको व्रत बस्छन् । अझ साउनको सोमवारको त महत्व नै बढी छ ।
पौराणिक मान्यतामा शंकरको पूजा आराधनाका लागि सर्वश्रेष्ठ दिन महाशिवरात्री त्यसपछि साउन महिनामा आउने प्रत्येक सोमवार र हरेक महिनामा आउने सोमवारको महत्व छ । देवादिदेव महादेवलाई साउन महिना अति पृय रहेको मानिन्छ ।
यसै मान्यता अनुसार श्रद्धालु भक्तजनहरु यो महिना, खास गरेर सोमवारको व्रत-उपवास तथा पूजा आराधना एवं रूद्राभिषेक, कवच पाठ, जप आदि गरी शिवजीको विशेष कृपा प्राप्त गर्छन् । त्यसैले सनातन धर्ममा यो साउन महिना अति पवित्र मानी आएका छन् ।
त्यसै कारण श्रध्दालु भक्तजनहरु मांसाहार गर्ने भएता पनि यो महिनाभरि माछा मासु परित्याग गर्ने गर्छन् ।
साउन महिनामा महिलाहरु कामुक बन्छन् भन्ने मान्यता हिन्दू सभ्यतामा मात्रै होइन, युरोपको क्रिश्चियन सभ्यतामा पनि छ । यही साउन महिनामा सासू-बुहारीले सँगै बस्न नहुने भन्दै विवाहित महिला साउने पानी छल्न माइती जाने नेपाली समाजको परम्परागत मान्यता छ ।
विकीपेडियाका अनुसार मध्य युरोपका देशहरुमा समेत साउने सोमवारको खास महत्व छ । मध्य युरोप, खासगरी पोल्याण्ड, चेक गणतन्त्र तथा पूर्वी युरोपको युक्रेन लगायतका देशका क्रिस्चियनहरुमा सोमवारको दिन केटीहरु पानी पानी हुने दिन हो । सोमबारको दिन केटाहरुले केटीहरुलाई पानीले भिजाइदिने गर्छन् । अझ आफूलाई मन परेकी केटीलाई पानी छ्यापेर टाउकोदेखि पाइतालासम्म निथ्रुक्कै भिजाउन पाउँदा केटाहरुले जितेको सम्झिन्छन् । यस्तो संस्कारलाई वेट मण्डे अर्थात भिजेको सोमवार भनिन्छ ।
भिजेको सोमवार मनाउँदा सबै पाप नष्ट हुने विश्वास गरिन्छ । वर्षैभरिका सोमवार यसरी पानीले भिजाउने खेल खेलिने भने होइन ।हिन्दु महिलाहरुले साउनको सोमवारलाई विशेष रुपमा मनाउने गरेझैँ मध्य तथा पूर्वी युरोपका इसाइ धर्मावलम्बीहरुले खासगरी क्रिश्चियनहरुको पवित्र सप्ताह इस्टरको दोश्रो दिन अर्थात इस्टर मण्डेको दिन यसरी महिलालाई पानीले भिजाउने काम गर्छन् । केटाहरु बोतल तथा बाल्टिनमा पानी भरेर केटीहरुलाई लखेट्दै पानी खन्याइदिने गरिन्छ ।
साउन माया मौलाउने मौसम हो । यही समयमा हो, वृन्दावनमा राधा र कृष्णले रासलीला रचाएका । त्यसैले होला, साउनलाई मायाको मौसम भनिन्छ ।मौसम रसिलो हुनाले मायाको पनि रसपान गराउँछ । परदेशिएका प्रेमीको सम्झनाले सँगीलाई सताउँछ । भनिन्छ, साउनमा नगरेको माया अघि–पछि कहिले गरिन्छ र ! साउने झरीसँगै मायाको बर्षात् हुन्छ । त्यसैले त साउनमा रूझेर भए पनि मायाको पगरीमा बेरिएका हुन्छन्, ठिटाठिटीहरु । यही मौसममा शिवले पार्वतीलाई बेसरी रूचाएका थिए रे !
दुनियालाई चकित पार्दै रुसले तयार पार्यो अर्को कोरोनाको भ्याक्सिन
टुहुरी बैनीलाई दाईले गरे यस्तो, नेहा सुनार बैनीको न्यायका लागि महाकाली पुगे भोजराज थापा (हेर्नुहोस भिडियो)
सियोना श्रेष्ठको अ’वस्था देखेर हस्पिटलले पनि हार मा’न्यो, हजुरहरुको एक शेयरको सहयोगले नानी को ज्या’न बच्नेछ….
दैलेखका कोरोना संक्रमित युवा भन्छन् – अस्पताल आएपछि मनोबल बढ्यो